Ndiani Anobatsirwa Nekushandisa Yekutakura Wiricheya? Ungave Iwe
Chinangwa chekupedzisira che wiricheya mushandisi anofanira kunge achifamba uye achizvivimba sezvazvinogona. Vanhu vamwe nevamwe vanoshandisa wiricheya kune zvakawanda zvakasiyana kufamba matambudziko uye nekuda kwezvinangwa zvakasiyana. Pane chero mukana we kushandisa a chokufambisa wiricheya? Izvo hazvibvumire mushandisi kuzvifambisa vega uye muchengeti kana murindiri anofanira kunge aripo kana murwere achifanira kutamiswa.
Mawiricheya ekufambisa inobatsira kune vanhu vasingakwanise kushandisa yakajairwa kana mota wiricheya nekuda kwekuremara kwepanyama kana kwepfungwa. Chokwadi ichi chiitiko chinoshamisa, tichiona iro simba remagetsi mavhiripu zvinogadzirwa kudzorwa kunyangwe nevanhu vane hushoma ruoko dexterity kana mhasuru simba. Mune zviitiko zve yose kuoma mitezo kana kushaya mitezo zvachose, munhu anozoda rubatsiro kufambisa.
Kutakura Wiricheya Sarudzo yako
Chero ani anokwanisa kushandisa magetsi wiricheya nekuoma kukuru asi ndiani anoda kuramba achirapwa kune chero nzvimbo yedambudziko ravo repanyama anogona kusarudza kushandisa a chokufambisa wiricheya nezve nyaya yemutengo uye nyore kushandisa. Kutakura mavhiripu ndiwo akaderera mitengo mavhiripu inowanikwa, uye zvakareruka chaizvo uye inotakurika. Kana mumwe munhu asingazoda kurapwa kwakapfuurira, magetsi emagetsi wiricheya inogona kuzvibhadharira mumavhiki mashoma chete nekuti munhu wacho haafanire kubhadhara mukoti.
Nekudaro kana a wiricheya mushandisi anoda kurapwa uye anonetsekana nekushandisa magetsi emagetsi wiricheya, vanogona kudzikisa mutengo nekushandisa a transport chair, uye panguva imwechete kudzikisira huremu iyo medical aid inoda kusunda kana wako wiricheya Iva nemotokari.
Zvigaro zvisingadhuri uye Zvivakwa Zvekurapa
Zvimwe kunze kweizvozvo, kutakura zvigaro zvinowanzoitirwa mamiriro ezvinhu epfupi-pfupi. Ivo anoshandiswa ku chinja zvipatara zvipatara varwere kana kune avo vari venguva pfupi vasina kusimba kufamba kana kushandisa akajairwa wiricheya sezvo vari kupora kubva padambudziko rehutano kana kurapwa. Paunenge uchifamba nemumwe anokwanisa wemuviri shamwari, simba wiricheya mushandisi anogona kuenda ne transport chair sezvo iri isingadhuri uye iri nyore-kurema uye inotakurika kufamba tool.
Kana iwe uri kutora rwendo, zvakadaro, iwe unogona zvakare kuve nesarudzo yekurendesa magetsi wiricheya kunzvimbo yako yezororo, uye simba remagetsi rinotakurika mavhiripu zviripo zvinogona kuunzwa mundege. Kune avo vanofamba vachifamba mega mega, uku kudyara kwakanakisa, kunyangwe huremu hwacho huchiri huremu zvakanyanya kana zvichienzaniswa ne transport chair. Kana iwe uchifamba nemumwe wako akagadzirira kukusundira iwe kutenderera, a transport chair sarudzo inodhura.
Kana kuzvikwanira kufamba hazviite kuwana kana kune epfupi-mamiriro ezvinhu, a chokufambisa wiricheya ndiyo imwe nzira yemutengo wakaderera yekukubatsira iwe kuti uwane nezvazvo.